10 amin'ireo torapasika tsara indrindra any Tenerife | Vaovao momba ny dia
10 amin'ireo morontsiraka tsara indrindra any Tenerife
Tenerife dia iray amin'ireo nosy be mpitsidika indrindra izay manolotra sidina mora vidy mandavantaona mankany amin'ny seranam-piaramanidiny roa ary misy ihany koa toetr'andro subtropika mahafinaritra izay manome mari-pana be amin'ny fotoana rehetra. Io no toerana mety indrindra hankafizanao fialan-tsasatra lava, fialan-tsasatra fohy na handosirana ny ririnina, tadiavinao ny torapasika mety aminy.
Ho hitantsika ny sasany ny morontsiraka tsara indrindra any Tenerife, na dia mazava ho azy fa tsy izy rehetra ireo no tokony hovangaintsika. Ilay nosy dia manana faritra be fasika maro hankafizany fialan-tsasatra tsara, ary misy ihany koa morontsiraka fanta-daza na amin'ny avaratra na amin'ny atsimo. Ny tolo-kevitra dia ny maka fiara hitsidika ny ankamaroan'ireo morontsiraka ireo.
1 Ny Kristiana
2 El Médano sy La Tejita
4 Ny Teresitas
5 Ny Varevaka
6 Benijo Beach
8 Puddle ny rivotra
9 Troya Beach
10 Ny Socorro
Ity dia morontsiraka an-tanàn-dehibe ary tsy isalasalana fa toerana fantatry ny rehetra izy io, hatramin'ny taona 60 dia iray tamin'ireny faritra fasika voalohany hampiantrano fizahan-tany marobe. Tsy dia tsara tarehy toy ny torapasika hafa hita amin'ny toerana voajanahary izy io, fa ny marina dia iray amin'ireo morontsiraka malaza indrindra izy io, eo amin'ny toerana mpizahatany iray izy ary afaka mijanona vitsivitsy miala eo isika. Ho fanampin'izay, misy ny karazana serivisy, fivarotana ary trano fisakafoanana eo akaiky eo, ka mahatonga azy io ho ankafizin'ny fianakaviana. Any atsimon'ny nosy izy io, ao Arona ary akaikin'ny seranam-piara-manidina Tenerife South, ka morontsiraka ahazoana aina ho an'ny rehetra.
El Médano sy La Tejita
Raha tonga eo amin'ny seranam-piara-manidina Tenerife South ianao dia mety efa mahita ity morontsiraka ity miaraka amin'ny tendrombohitra mena mena tsy misy diso avy amin'ny fiaramanidina. dia tendrombohitra no mampisaraka ny morontsirak'i El Médano sy La Tejita, tora-pasika tena malaza amin'ny fanatanjahantena toy ny kitesurfing. Eo am-pototry ny tendrombohitra dia misy faritra iray ho an'ireo miboridana ary eny an-tendrombohitra dia afaka mandeha mitsangatsangana ianao handany ny andro.
El Bollullo dia iray amin'ireo morontsiraka Tenerife tsara indrindra ary ao no ahitantsika ny fasika volkano sy mainty mahazatra an'ny nosy. 45 minitra monja avy eo Puerto de la Cruz, any avaratry ny nosy, ary manana toerana mangina sy mahazatra, voahodidin'ny habaka voajanahary.
Las Teresitas dia hafa morontsiraka akaikin'ny toerana fizahan-tany any Santa Cruz. Izy io dia morontsiraka malalaka, mora azo ary misy serivisy lehibe ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Ny zava-misy mahaliana dia morontsiraka artifisialy namboarina mba hanomezana ny fangatahan'ny mpizahatany eto an-drenivohitra. Avy any Santa Cruz dia azo atao ny mandeha bus hahatratra ny folo minitra eo ho eo, ka io no toerana hilentika rehefa mijanona eto an-drenivohitra isika. Eo akaiky eo no tanàna fanjonoana tsara tarehy any San Andrés.
Ny morontsirak'i Las Gaviotas koa dia akaiky ny renivohitra, ary ao anatiny dia afaka maka sary mahafinaritra ianao, satria manana fasika maizim-be sy tendrombohitra volkano tsara tarehy midina mankany amoron-dranomasina.
Toa iray amin'ireo morontsiraka malaza indrindra io Ankafizo ny filentehan'ny masoandro amin'ny nosy. Ny Anaga Mountains dia mampiavaka an'ity torapasika ity ary mamorona toerana mety indrindra amin'ny fakana sary mahatalanjona rehefa milentika ny masoandro. Ity morontsiraka ity dia nofidian'ny maro ho an'ny fanatanjahantena anaty rano. Tsy mety loatra amin'ny fianakaviana izy io, satria tsy dia misy serivisy firy.
Ity no iray amin'ireo morontsiraka mahavariana sy mahafinaritra indrindra eto amin'ny nosy. Ao Tenerife dia misy torapasika maro lasa toerana malaza, saingy notehiriziny ny hatsarany voajanahary, amin'ny ampahany betsaka satria sarotra ny fidirana ao. Tsy mety amin'ny fianakaviana na ho an'ireo te-hipetraka eo alohan'ny morontsiraka ary mandany andro miaraka amin'ny serivisy akaiky. Fa mety indrindra ho an'ireo izay te hankafy ny iray amin'ireo morontsiraka ireo izay toa mbola wild. Tsy asaina ny lomano satria misy onja sy ranomasina misamboaravoara foana, izay mety indrindra amin'ny fanatanjahantena anaty rano.
Puddle ny rivotra
Tsy moron-dranomasina amin'ny fanao mahazatra io, fa a zoro izay navadika ho dobo voajanahary. Any amin'ny morontsiraka avaratra, any La Guancha, no misy azy. Toerana tena tsara ahafahanao mandro tsy misy olana, satria ho voaro amin'ny vato isika.
Iray amin'ireo Ny faritra fizahan-tany be indrindra any atsimon'ny Tenerife dia Costa Adeje, ary tsy isalasalana fa ho iray amin'ireo toerana itadiavantsika trano honenana izany raha miantsona amin'ny seranam-piaramanidina atsimon'ny nosy isika. Noho izany dia mila mametraka ny torapasika Troya amin'ireo toerana tianao indrindra isika. Izy io dia morontsiraka malalaka izay matetika feno olona amin'ny fotoam-pahavaratra, fa ny tsara dia maro ny serivisy, manomboka amin'ny fandriana amam-borona ka hatrany amin'ny mety fanaovana spaoro rano na bara amoron-dranomasina eo akaiky eo. T amoron-dranomasina iray hafa akaikin'ny tanàna izay mety tsara ho an'ny fianakaviana sy ireo mijanona ao Costa Adeje, handany ny andro.
Morontsiraka ity namboarina ho an'ny olona mihena ny fivezivezena, izay manana saina manga sy serivisy samihafa ihany koa. Izy io dia torapasika kely any avaratry ny nosy ary manolotra faritra misy Wi-Fi aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » 10 amin'ireo morontsiraka tsara indrindra any Tenerife
Fety any Fiji, fialantsasatra any paradisa
Inona no ho hita any Malta, toeran'i Eropa